Ogaden News Agency (ONA) – Booliska Spain oo Isku Gedaamay Goobo Loo Asteeyay Aftida Catalonia.
Booliska Spain oo Isku Gedaamay Goobo Loo Asteeyay Aftida Catalonia.
Dowladda Dhexe ee dalka Spain ayaa sheegtay in ciidamada booliska ee dalkaasi ay isku gedaameen kun iyo seddex boqol oo xarumood, kuwaa oo loo asteeyay inay ka dhacaan aftida la filayay inay maanta ka dhacdo gobolka Catalan ee dalka Spain.
Booliska dalka Spain ayaa sidookale weeraray xarrun isgaadhsiin oo ay laheyd dowlad goboleedka Catalania. Arrintan ayaa qeyb ka ah dadaalada dowladda Spain ay ku dooneyso inay ku joojiso aftida lagu murmay ee lagu waday inay maanta ka dhacdo gobolka Catalonia ee dalka Spain.
Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa kusoo warrantay in booliska ay doonayeen inay kala furfuraan qalab loogu talo galay in lagu isticmaalo aftida. Mas’uuliyiinta gobolka Catalonia ayaa doonayay in xaruntaasi ay kamid noqoto goobaha codbixinta, hasayeeshee dowladda dhexe ee dalkaasi ayaa qorsheyneysa inay baajiso aftida dadka gobolkaasi ay ku doonayaan inay kaga go’aan Spain inteeda kale.
Kumanaan ciidammada booliska ah ee dalkaasi ayaa loo daad gureeyay gobolkaasi, waxaana dowladda Spain ay sheegtay in aftidani ay tahay mid sharci darro ah.
Dhanka kale sharikadda Google ayaa tirtay app loo adeegsan lahaa in codbixiyayaasha Catalonia loogu tilmaamo goobaha codbixinta. Dadka doonaya inay lasoo degaan app-kan ayaan hadda gobolkaa ka heli karin, balse kuwii horay ula degay ayaa adeegsan kara. Sharikaddan ayaa sheegtay inay raacayso amar maxkamadeed.
Catalonia ayaa ah gobol qani ah oo ay ku nool yihiin 7.5 milyan oo qof, isla markaana leh luuqad iyo dhaqan u gaar ah iyo weliba ismaamul ilaa xad ah, balse dastuurka Spain ayaa dhigaya inuu ka mid yahay dalkaasi.